स्कुटर चलाउदा अचानक भित्रबाट विषालु सर्प निस्किए पछी बल्ल बल्ल बच्यो ज्यान हेर्नुहोस – PanchKhal Online
Home/समाचार/स्कुटर चलाउदा अचानक भित्रबाट विषालु सर्प निस्किए पछी बल्ल बल्ल बच्यो ज्यान हेर्नुहोस
स्कुटर चलाउदा अचानक भित्रबाट विषालु सर्प निस्किए पछी बल्ल बल्ल बच्यो ज्यान हेर्नुहोस
काठ्मण्डौ, सर्प एक घस्रने प्रजातीको मांसाहारी सरिसृप जीव हो। प्रकृतिको खाद्य श्रृंखलामा यो द्वितीय वा तृतीय उपभोक्ताका रूपमा रहेको हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान अनुसार सर्पका सबै प्रजातिहरू मांसहारी हुन्छन्। कोही कीरा–फट्याङ्ग्रा खान्छन् भने कोही भ्यागुता, मुसा जस्ता साना जनावरहरूको शिकार गर्दछन्। अजिंगरले त स–साना बनेल, हरिणका पाठालगायत मान्छेकै केटाकेटी पनि निलिदिन्छ। त्यसैले सर्प, साँप, नाग भन्नासाथ हामी डर, भय, त्रास, कौतुहल, रहस्ययुक्त मनस्थितिमा पुग्दछौँ।
तर सबै सर्प भने बिषालु हुदैन्न। विश्वमा हालसम्म पन्ध्र परिवारअन्तर्गत करीब २ हजार ९ सय प्रजातिका सर्प पाइएका छन्। त्यसमध्ये नेपालमा करिब ८० देखि ८९ प्रजातिका सर्प पाइन्छ भन्ने जीवशास्त्री हरूको अनुमान छ। संसारमा पाइने करिब २ हजार ९ सय प्रजातिका सर्पमध्ये केवल ७ सय ५० मात्र विषालु छन्। अझ त्यसमा पनि केवल २ सय ५० प्रजातिका सर्प मानिसका लागि खतरनाक मानिन्छन्।नेपालमा पाईने सर्प मध्ये २० प्रजाति मात्र विषालु हुन्छन्। अझ त्यसमा पनि कोब्रा, करेत र दुई प्रजातिका भाइपर गरी केवल चार प्रजातिका सर्प मात्र मानिसका लागि खतरनाक मानिन्छन्। त्यसैले सर्प देख्नासाथ त्रसित हुनु आवश्यक छैन तर सतर्क भने हुनैपर्छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खाद्यान्नको अभाब भयो भने मलाई फोन गर्नुस्, सहयोग गर्छु !
नास्पाती खानुहुन्छ ? फाइदाबारे पनि जान्नुस्-
पाँचथर ९ जनाको हत्याकाण्ड, प्रहरीको अन्तिम निष्कर्ष यस्तो निस्क्यो,